रमेश विकल मरेका छैनन्,(अलकाआत्रेय चूडाल)
नेपाली साहित्यका पारखी सबैले रमेश विकल विकललाई सुनेका वा पढेका हुन्छन् । त्यस्तै मैले पनि नेपाली साहित्यमा एम. ए. गर्दा रमेश विकललाई साहित्यकारको रूपमा पढें, सामान्य परिचय पाएँ । त्यसैताका नेपाल टेलिभिजनबाट अविरल बग्दछ इन्द्रावती भन्ने टेलिश्रृङ्खला प्रसारित भयो । त्यो मार्मिक कथाले मलाई प्रगतिवादी रमेश विकलको अझ नजीक पु-यायो । त्यसको धेरै पछि काठमाडौंमा दश जोड दुईको कक्षामा नेपाली विषय अन्तर्गत मधुमालतीको कथा पढाउँदा म उनका कथाकी प्रशंसक भएँ ।
पाठ्यक्रममा भएका कथाहरूमा मैले पढाउने पहिलो कथा विश्वेश्वरप्रसादको सिपाही हुन्थ्यो भने अन्तिम कथा रमेश विकलको मधुमालतीको कथा हुन्थ्यो । सिपाही कथामा सिपाहीको स्त्रीलोलुपताको चरित्र र उसको व्यवहारले विद्यार्थी हाँसेर रमाउँथे भने मधुमालतीको कथामा शंकर र गौरीको दर्दनाक बिछोड भएपछि कक्षा स्तब्ध हुन्थ्यो । कथा पढ्न हामीलाई तीन दिन लाग्थ्यो । तेस्रो दिन कथा सकिन्थ्यो । शंकर र गौरीको मिलनको हाम्रो आशा पनि उसको आलु घोडा सरीनै किचीमिची हुन्थ्यो । सबैका आँखा रसाउँथे । सामाजिक असमानताप्रतिको विद्रोह उम्लेर आउँथ्यो । त्यत्तिकैमा घण्टी बज्थ्यो अनि रसिला आँखा लिएका विद्यार्थीहरू विद्रोहको आगो निभाउँदै कक्षाबाट बाहिरिन्थे ।
हरेक पटक कथा सकिंदा मलाई त्यो बालमनोविश्लेषकलाई अभिवादन गर्ने इच्छा जागेर आउँथ्यो । साथीहरू भन्थे – रमेश विकल आफै शंकर हुन् । यो रमेश विकलको आफ्नै कथा हो । अनि मलाई लाग्थ्यो, रमेश विकल शंकर नभए पनि शंकरलाई नजीकबाट देख्ने र चिन्ने चाहिं पक्कै हुन् । त्यसैले त साहित्य समाजको ऐना हो । नेपालीमा दुई चार अक्षर कोर्ने भएपछि म आफ्नो निर्णयमा अझ दृढ हुँदै गएँ ।
२०६३ साल तिर मैले मेरो बाल्यकालको संस्मरण लेखें । त्यसको विमोचन गर्ने कुरा चल्यो । मेरो इच्छा रमेश विकलको हातबाट विमोचन गराउने थियो । तर यसको संभावना ज्यादै क्षीण थियो, मैले रमेश विकललाई व्यक्तिगतरूपमा चिनेकी थिइनँ । मैले लेखेको त्यो पुस्तक बुवालाई थाहा नदिई उहाँलाई समर्पण गर्ने हुँदा उहाँको सहयोग लिने पनि सम्भावना थिएन । तर मेरो यो इच्छा कवि मञ्जुलले पु-याइदिनु भयो । उहाँले कथाकार विकलसँग फोनमा कुरा गरेर मेरो परिचय गराइदिएर भेट्ने समय पनि मिलाइदिनुभयो ।
फुपू उपमा अधिकारी र म प्रमुख अतिथिलाई निम्तो गर्न आरूबारी हिंड्यौं । कवि मञ्जुलले उहाँको घर देखाउँदै भन्नु भएको थियो – "बौद्धबाट आरूबारीतिर लागेपछि जसले पनि विकलदाइको घर बताइदिन्छ ।" त्यस्तै भयो । हामी हरेक मोडमा सोध्दै जान्थ्यौं । मानिसहरू देखाउँदै जान्थे । घरमा त पुग्यौं । तर घरमा कोही रहेनछ । हाम्रो सबै उत्साह सेलाएर गयो ।
त्यत्तिकैमा बाटोमा एउटी केटीले हामी अलमलिएको देखेर भनिन् – "ए ! बुवा त पुरानो घरमा हुनुहुन्छ । आज उहाँका नातिको बिहा छ । म त्यतै जाँदै छु । हिंड्नुस् । तपाईँहरू पनि बिहामा आउनु भएको हो ?" हामीलाई देउतै भेट्टाएजस्तो भयो । तर फेरि अकस्मात् विचार आयो बिहामा बिना निम्ता कसरी जाने ? हामीसँग सोच्ने समय थिएन । जेसुकै होस् भनेर हामी उनका पछि-पछि गयौं ।
असारको महिना थियो । घाम चरक्क चर्किएको भए पनि चीसो बतासले त्यसको ताप बगाएर लगेको थियो । बर्षाले धूलो पखालिदिएकाले होला रुखविरुवाहरू घाममा विशुद्ध हरियाली प्रदर्शन गरेर हावाको तालमा नाच्दै थिए । खेतका कान्लामा धान बयेली खेल्ने प्रयासमा पाइताला उचाल्दै थिए । हामी खेतका आली हुँदै गन्तव्यमा पुग्यौं । बिहा घरमा रमझम थियो ।
एकै छिन पछि रमेश विकल आउनु भयो । किताबको फोटोमा देखेको जस्तै टोपी र चश्मा लगाएर । रमाइलो कुराकानी भयो । उहाँले नयाँ दुलहा-दुलही पनि चिनाइदिनु भयो । हामीलाई ननिम्त्याएको अनुभव भएन । बस्नासाथ खण्डे थालमा विभिन्न परिकार पनि आइपुगे ।
हामी विमोचन कार्यक्रमको कुरा गर्दै थियौं त्यत्तिकैमा तारा आइन् । तारा चालिसे मेरी सहपाठी हुन्, नेपाली एम. ए. पढ्दाकी । मलाई राम्ररी थाहा थियो उनी साहित्यकार विकलकी छोरी हुन् भन्ने । उनी मेरी मिल्ने साथी पनि हुन् । त्यो बेला मैले अचम्मसँग बिर्सेकी थिएँ, उनलाई । त्यहाँ उनलाई एक्कासि देख्दा म सपनाबाट बिउँझिए जस्ती भएँ । पद्मकन्यामा पढ्दाका दिनहरू एक-एक गर्दै चित्रपटझैं आँखा अगाडि आए ।
ताराले पनि थाहा पाइन् पुस्तक विमोचनको र बुवालाई प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्ता गर्न हामी आएको कुरा । उनी अकस्मात् रिसाइन् र भनिन्- "बुवा कतै जानुहुन्न । उहाँलाई गाह्रो हुन्छ । कार्यक्रम लामा हुन्छन् । लाने बेलामा लान्छन् अनि पु-याउँदैनन् । यो कुरा हुँदै हुन्न ।"
म छाँगाबाट खसेर भुईँमा पछारिएँ । ताराको कुरा जायज थियो । तारा साथीको लागि भन्दा पनि बाबुको स्वास्थ्यको कारणले चिन्तित एउटी छोरीको रूपमा बोल्दै थिइन् । मैले पनि एउटी छोरी भएर हेरें । उहाँलाई कार्यक्रममा लाने साहस मलाई पनि भएन । म निराश भएँ । तर मेरो निराशाको बादल साहित्यकार विकलको स्नेही आवाजले फटाइदियो । उहाँले भन्नुभयो- "म जान सकिहाल्छु नि । मलाई के भएको छ र ! म आउँछु नानी !" शायद एउटा वरिष्ठ स्रष्ट्राले साहित्यमा बामे सर्न लागेको बालकको उत्साह मार्न चाहेन । शायद उहाँले त्यो नभनेको भए, त्यो बालक कहिल्यै टुकुटुकु हिंड्ने थिएन । मेरो द्रवित हृदयले त्यो ममतालाई साष्टाङ्ग प्रणाम ग-यो ।
त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो – "यो मेरो छोराको घर हो । अब म बस्ने घर जाऊँ ।" हामी उहाँ सँगै अर्को घरमा आयौं । उहाँले हामीलाई कति खुशी भएर आफ्नो कोठा देखाउनुभयो । लेख्ने ठाउँ देखाउनुभयो । उहाँले बनाएका चित्रहरू देखाउनुभयो । हामीले बिहा घरमा भोज खाएर आएका थियौं तर त्यहाँ पनि केही त खानै पर्ने भयो । अनि हामीले घरकै मीठो दही खायौं । हामीलाई खुवाएर पनि उहाँलाई चित्त बुझेन । पटक पटक तपाईँहरूलाई के दिउँ भन्दै उहाँ केही खोज्दै हुनुहुन्थ्यो । उपमा दिदीले भन्नुभयो- "हामीलाई आशीर्वाद दिनुस् ।" उहाँले मुस्कुराउँदै हाम्रो टाउकोमा हात राख्नुभयो । उहाँले आफ्नो कथा सङ्ग्रह "हराएका कथाहरू" हामीलाई एक एक प्रति उपहार पनि दिनुभयो । उपमा दिदीसँग क्यामरा भएको मोबाइल थियो । उहाँले तस्वीर पनि खिच्नुभयो । त्यो दिन मलाई आफुसँग क्यामरा नभएको र क्यामरा भएको मोबाइल पनि नभकोमा साह्रै नमज्जा लाग्यो ।
त्यो २०६३ असार २२ को दिन थियो । विमोचन कार्यक्रम भोलिपल्ट असार २३ मा थियो । हाम्रो धेरै तयारी बाँकी भएकोले हामीले त्यहाँ बस्न चाहँदा चाहँदै पनि बिदा हुनुपर्ने थियो । साहित्यकार विकल भने अब गैहाल्ने र ? भन्दै हुनुहुन्थ्यो । अहिले त्यो आतिथ्य, त्यो प्रेम र आशीर्वाद अब इतिहास बन्यो भन्ने कुरा पत्याउन पनि गाह्रो लाग्छ । तर यो यथार्थ हो । जीवन अनित्य छ, विनाशी छ, शरीर मर्छ, तर साहित्यकार रमेश विकल कहिल्यै मर्दैनन् । उनी आफ्ना रचनामा मात्र होइन, उनले माया गरेका मजस्ता कैयौं नव साहित्यकर्मीका हृदयमा र तिनका कलममा सँधैं बाँची रहन्छन्, हाँसिरहन्छन् ।